Nrụrụ aka nke Akwụkwọ Nsọ - IntegritySyndicate.com
Mbido Ntọala Akwụkwọ Nsọ Nrụrụ Aka nke Akwụkwọ Nsọ
Nrụrụ Aka nke Ederede na -akwado Ọnọdụ Atọ n'Ime Otu
Ndị kwere na Atọ n'Ime Otu nwere omume ịrịọ amaokwu ụfọdụ dịka ihe akaebe maka ozizi ha n'agbanyeghị na amaara amaokwu ndị a nwere ọgụgụ isi dị iche iche nke na -egosi na emerụla ihe odide ahụ.
Zekaraya 12: 10
Ndị na -akwado Atọ n'Ime Otu na -agụ amaokwu a dịka a ga -asị na Jizọs bụ Yahweh kwuru, "Ha ga -ele m anya onye ha mara ube." Agbanyeghị, ụfọdụ ihe odide Hibru 'lere ya anya' ọ bụghị 'lee m anya. N'ezie, nhota nke Jọn onyeozi jiri mee ihe na Jọn 19:37 na -arụtụ aka na izi ezi nke ọgụgụ mbụ karịa nke ikpeazụ. Ọbụghị naanị otu a, ụdị '' Lekwasị m anya '' enweghị isi na gburugburu ebe ọ bụ na ọ na -ekwu Ha na -ele anya ''ME"Onye a mara ube ma na -eru uju onye ọzọ,"Ya. "
Ụfọdụ ihe odide na -agụ "monogenes Nwa "ebe ndị ọzọ na -agụ"monogenes Chineke. ” Ihe odide Ndị Kraịst oge mbụ na -ehotakarị ọgụgụ '' Ọkpara '' ọ bụghị ịgụ '' Chineke ''. Ọgụgụ “Chukwu” sitere na ihe odide mbụ nke amaokwu a nke achọtara na Nag Hammadi, Egypt. Agbanyeghị, ọ bụ ihe ama ama na mbido apụtaghị ihe kachasị mma ebe nrụrụ aka bidoro n'oge. Ihe akaebe nke akụkọ ihe mere eme na -egosi na ịgụ akwụkwọ “Chukwu” bụ ọdịnala ndị Egypt ebe ọ bụ na -ebu ụzọ hụ ọgụgụ a n'etiti ndị Egypt dịka Origen na Clement nke Aleksandria. Ọgụgụ “Chukwu” nwere ike bụrụ nrụrụ aka nke ndị Gnostic kemgbe “monogenes Chineke ”bụ akụkụ dị mkpa nke nkwenkwe ha.
Ọrụ 7: 59
Nsụgharị King James tinyere okwu a “Chukwu” n'ime amaokwu a nke mere ka ọ dị ka a na -akọwa Jizọs dị ka Chineke.
Ọrụ 20: 28
Ihe odide mbụ dị mkpa dị ka Codex Alexandrinus, Codex Bezae, na Codex Ephraemi Rescriptus gụrụ “ụka nke Onyenwe anyị” kama ịbụ “ụka nke Chineke.” Irenaeus hotakwara “ụka nke Onyenwe anyị.
1 Kọrịnt 10: 9
Ụfọdụ ihe odide nwere “Kraịst” ebe ihe odide ochie ndị ọzọ na -agụ “Onyenwe anyị”.
Ndị Efesọs 3: 9
Ụfọdụ ihe odide nwere “site na Jizọs Kraịst” ka ihe odide ndị ọzọ agaghị eme.
Nnukwu ihe akaebe nke ihe odide ahụ amanyela ndị ọkà mmụta ikweta na "Chineke e gosipụtara n'anụ ahụ ”ụdị amaokwu a bụ nrụrụ aka. Ọ bụkwa ihe nzuzu ebe ọ bụ na ọ ga -eme ka ndị mmụọ ozi hụ Chineke (gịnị kpatara o ji doo anya?) Nakwa na Chineke ziri ezi na mmụọ.
Ndị na -akwado Atọ n'Ime Otu na -arịọkarị Iwu Granville Sharp banyere amaokwu a ka ọ rụọ ụka na a na -akọwa Jizọs dị ka Chineke. Otú ọ dị, Codex Sinaiticus, bụ́ ihe odide ochie, agụghị “Chineke na Onye Nzọpụta” kama “Onyenwe anyị na Onye Nzọpụta” anyị.
Nsụgharị King James tinyere okwu ahụ “Chukwu” n'ime amaokwu a nke mere ka ọ dị ka Jọn na -akọwa Jizọs dị ka "Chineke."
Nnukwu ihe akaebe nke ihe odide ahụ amanyela ndị ọkà mmụta ikweta na amaokwu a bụ nrụrụ aka etinyere n'ime Akwụkwọ Nsọ.
Maka ọmụmaatụ ndị ọzọ nke nrụrụ ederede, lee akụkọ ahụ na BiblicalUnitarian.com:
Ndị mmeri abụghị naanị ide akụkọ ihe mere eme: ha na -emepụtagharịkwa ederede. Ọrụ a na -enyocha mmekọrịta chiri anya n'etiti akụkọ gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ọdịnala ọdịnala nke Agba Ọhụrụ na -apụta, na -enyocha otú ọgụ mbụ dị n'etiti “ịjụ okwukwe” na “orthodoxy” si metụta nnyefe nke akwụkwọ nke e mere ọtụtụ n'ime arụmụka ahụ. .
* Ekwesịrị ịtụle Bart Ehrman maka ọrụ mbụ ya na nkatọ ederede - ọ bụghị ọrụ ọ rụpụtara n'oge na -adịbeghị anya (ihe karịrị afọ 20) na nkọwa Akwụkwọ Nsọ.
Akwụkwọ mbipụta Bruce M. Metzger nke edegharịrị nke ọma bụ akwụkwọ ntuziaka kachasị ọhụrụ maka nkatọ ederede nke Agba Ọhụrụ. Ederede nke agba ohu, Mbipụta nke Anọ. Ntughari a na -eweta mkparịta ụka banyere ihe ndị dị mkpa dị ka ihe odide Grik mbụ na ụzọ nkatọ ederede ruo ugbu a, na -ejikọ nchọpụta nyocha na nso nso n'ime akụkụ ederede (na -emegide ntụgharị ndị gara aga, nke chịkọtara ihe ọhụrụ na ndetu n'ime ngwa ). Ederede ọkọlọtọ maka ọmụmụ n'ọmụmụ Akwụkwọ Nsọ na akụkọ banyere Iso Ụzọ Kraịst kemgbe mbipụta mbụ ya na 1964.